Vidin-tsolika : Maka tombony mihoa-pampana ireo mpandraharaha -
AccueilRaharaham-pirenenaVidin-tsolika : Maka tombony mihoa-pampana ireo mpandraharaha
22/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny fanadihadian’ny kabinetra frantsay BEICIP Franlab, rantsa-mangaikan’ny IFP Energies Nouvelles, izay vatsian’ny Banky Iraisam-pirenena vola, mahakasika ny vidin’ny solika eto Madagasikara, voaporofo izao fa manararaotra loatra ireo mpandraharahan’ny solika eto amintsika.
Tsy vitan’izay fa mbola manohitra ny vaovaon’ny Banky Iraisam-pirenena mahakasika io fanararaotana io ihany ireo mpandraharahan’ny solika eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Tsiahivina mantsy fa nisy ny fanadihadiana nampanaovin’ny Fanjakana tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny Vola sy ny Tetibola (MFB) sy ny minisiteran’ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’afo (MEEH) ny Banky Iraisam-pirenena mahakasika ny fametrahana ny vidin’ny solika manaraka ny firafitr’izany araka ny lalàna.
Hita izao fa mangalatra ary mambotry ny vahoaka sy ny firenena no ataon’ireo mpandraharahan’ny solika eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Araka ny fantatra mantsy, raha ny vidin’ny solika amin’ny maha varotra izany, dia tsy maintsy misy tombony ho an’ireo mpandraharaha izany. Tsy izay anefa no zava-mitranga ankehitriny fa ao anatin’ny tombony tena izy, izay efa tafiditra amin’ny vidiny, mbola mihoatra avo telo heny noho io tombony atao hoe « ara-dalàna » io ny tombony alain’izy ireo amin’izao fotoana izao.
Araka ny vaovao, tao anelanelan’ny taona 2012 – 2013, nilatsaka hatrany amin’ny 25 Dolara ny vidin’ny barila amin’ny tsena iraisam-pirenena. Raha io vidiny amin’ny tsena iraisam-pirenena io, dia mbola tsy nampidina ny vidin’ny solika mihitsy ireo mpandraharaha eto Madagasikara. Ankehitriny, raha oharina amin’ireo firenena any ivelany, hita ho mifanalavitra ary tena faran’izay lafo ny hamarotan’ireo mpandraharaha sady mpamongady solika eto amintsika.
Ho an’i Madagasikara manokana, efa 140 dolara/m3 no alain’ireo mpamongady raha toa ka 53 dolara/m3 ny an’i Tanzania, 70 dolara/m3 ny an’i Kenya ary 91 dolara/m3 ny an’i Côte d’Ivoire. Hita ary tsapa, araka izany, ny elanelan’ny tombom-barotra amin’ny famarotan’ireo mpamongady ny vidiny hamarotany azy amin’ireo mpaninjara. Marihina anefa fa vidiny iraisana no handraisan’izy ireo izany amin’ireo mpamatsy. Noho izany indrindra, efa mihoatra amin’ny tokony ho izy izany izao ny vidin’ny solika eto Madagasikara, araka ireo tarehimarika fanoharana ireo. Izany indrindra no manaporofo fa mangalatra ireo mpandraharahan’ny solika eto amin’ny firenena. Marihina anefa fa tokony mipetraka sy hajaina araka ny tokony ho izy ny lalàna mifehy ny firafitry ny vidin’ny solika.
Anisan’ny olana goavana mipetraka mantsy hatramin’izay, ny tsy fisian’ny fifaninanana eo amin’ny tsenan’ny solika eto Madagasikara. Izany hoe, mitovy ary iraisana avokoa ny vidin’ny solika eny amin’ireo mpaninjara, satria mpamatsy iray ihany no angalana sy ividianan’izy ireo ny solika eto amintsika.
Ankoatra izay, araka ny fanadihadiana natao hatrany, dia efa nangataka ny hanamboarana sy hanatsarana io vidin-tsolika io ny Banky Iraisam-pirenena. Saingy, mbola miziriziry amin’ny hevi-dratsiny amin’ny fangalarana tsy ara-drariny hatrany ireo mpandraharahan’ny solika eto Madagasikara.
Marina loatra ny nambaran’ny mpanara-baovao hoe « tsy hiova mihitsy izany Marc Ravalomanana izany ». Heverin’ity filoha tale jeneralin’ny orinasa TIKO it,y fa azy avokoa izao rehetra izao: Antananarivo, Madagasikara, JIRAMA ary ny volam-bahoaka, sns. Rehefa mila ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Nampiseho fitiavan-tanindrazana tokoa